विदेशबाट यी समान बोकेर फर्कँदै हुनुहुन्छ ? बढ्यो भन्सार शुल्क, टेलिभिजन र रक्सी कति ल्याउन पाइन्छ ? – Online Nepal Site
अर्थात् पहिलो ५० ग्राम सुन ल्याउँदा ४७ हजार ५ सय भन्सार महसुल तिरेर भित्राउन पाइने भएको छ । पछिल्लो ५० ग्राम सुनको हकमा भने प्रति १० ग्राम १० हजार ५ सय भन्सार महसुल तिरेर ल्याउन पाइने भएको छ ।
यात्रुले सरकारको तोकेको भन्सार महसुल तिरेर आफ्नो साथमा थप सामान ल्याउन पाउने भएका छन् । भन्सार तिरेर म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिरेटर, वासिङ मेसिन, पंख्या, रेडियो, सिठि प्लेयर र डिभिसी प्लेयर एक/एक थान साथमा ल्याउन पाइने भएको छ ।
लुगाफाटो, जुत्ता, कस्मेटिक सामान बढीमा १५ थानसम्म भन्सार तिरेर ल्याउन सकिने भएको छ । घरायसी प्रयोगका सामान (मिक्स्चर, जुसर, सिलाई मेसिन, ग्याँसटेबुल, इस्त्री, राइसकुकुर लगायत)सामान दुई/दुई थानसमेत भन्सार तिरेर नेपाल ल्याउन पाइने भएको छ ।
खुसीको खवर:सुनको मूल्य घट्यो, विशेषज्ञ भन्छन् केही दिनमा ७०,००० पुग्ने आशंका